Sida loo dhaqmo haddii ay dhacdo biyo xire xoog leh | Saadaasha Shabakadda
Sida loo dhaqmo haddii ay dhacdo biyo xireen xoog leh
Sergio Gallego | | Cimilada, Dhacdooyinka saadaasha hawada
Isbedelka Cimilada waxay bilaabaysaa inay ku yeelato cawaaqib xumo meelo badan oo meeraha ah. Marka laga hadlayo Spain, bisha Luulyo Waxay ahayd mid ka mid ah kuwa ugu kulul taariikhda oo dhan iyo bisha Sebtember Waxay si dhab ah ugu bilaabatay duufaanno, duufaanno iyo biyo-baxa.
Kiiska ee daadadka iyo biya-mareennada, waa inaad aad u taxaddartaa oo aad raacdaa taxane ah oo talooyin si looga fogaado cawaaqibta dhimashada.
Waxa ugu muhiimsan ee la sameeyo haddii lagu xayiro daad ah, waa inaad is dejiso oo aan waligaa lumin neerfaha. Si kastaba ha noqotee isku day ka gudub waddo fatahaad ah mar haddii biyuhu dhaqaaqayaan xawaare sare ku socda oo ma ogid waxa carqalado jiri kara salka ku haysa. Haddii ay dhacdo in biyo-xidheenku kaa yaabiyey oo uu bilaabmayo inaad jiido gaarigaaga, Waa inaad ka degtaa gaariga si kasta.
Xoogga biyaha iyo biyo-baxa ayaa sababi kara gaarigaaga ayaa quusa gudaha kula jira Si aad uga degto gaariga, isku day inaad marka hore sameyso Albaabka dhexdiisa haddii ay dhacdo in dhererka biyuhu kuu oggolaado inaad sameyso. Waa muhiim inaad xasuusato, waa inaad sameysaa irdaha dhexdooda kuwaas oo ku yaal dhinaca ka soo horjeedka jihada hadda jirta. Haddii aysan suurtagal ahayn, ikhtiyaarka kale ayaa ah in laga baxo daaqada gaariga. Haddii aadan furi karin, ku jebi qaar nooc shay fiiqan ka taxaddar inaadan ku dhaawacin.
Xulashada seddexaad waa inaad baxdo iyada oo loo marayo muraayadda hore, si tan loo sameeyo, si adag ugu riix labada lugood ilaa inta muraayaddu wada jajaban tahay. Talo kama dambays ah oo ay tahay inaadan iloobin, xusuusnow inaad is dejiso xasilloonida ka sarraysa dhammaan, u soo bax dhinaca ka soo horjeedka hadda jira oo dhaqso u hawlgal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Sida loo dhaqmo haddii ay dhacdo biyo xireen xoog leh
5 qaababka foosha xun ee F5
Saddex duufaan oo ka tirsan Qeybta 4 ayaa hal mar ku garaacay Badweynta Baasifigga